Mashiinka kuleylka - Ikkaro
Un mashiinka kuleylka waa qayb ka mid ah walxaha farsamada, kaas oo u oggolaanaya helitaanka tamar farsamo Xaaladda kuleylka ee dheecaanka la isku cadaadinayo ee dhex mara.
Fiidiyow aad u fiican oo ku saabsan hawlgalka mashiinka 4-stroke. 4ta weji, cirbadeynta, riixitaanka, balaarinta iyo qiiqa si cad ayaa loo arkaa, iyo sidoo kale howlgalka qalabka iyo walxaha qarxa.
Aad u firfircoon,
Sida loo uruuriyo mootada
Sidee loo uruuriyaa mishiinka 4-stroke. Sida fiidiyowga mishiinka shaqeynaya, waa mid wargelin badan leh, in kasta oo ay ugu wanaagsan tahay in mashiin duug ah la qaato, la dumiyo oo dib la isugu soo celiyo. Mid ka mid ah dhaqammada ugu wanaagsan ee aan ku soo qabtay xirfadayda oo dhan.
Dhisida Mashiinka Uumiga Guriga Lagu Sameeyo
Iyada oo loo marayo Qaabaynta Argentina
Waxaan ka helay tilmaamahan ku saabsan sida loo dhiso mashiinka uumiga fudud oo si fiican u shaqeeya.
Bistooladdu waxay daaran tahay baaruud naxaas ah
Mashiinka hal-xabbo ee naxaasta ah ee loo isticmaalo gaaska dusha ka dhisa ee laba geesle ah (mid ka mid ah guryaha aan u isticmaalo mashiinka waalka) madaxa silsiladdu waxay isticmaalaan lacag bir ah oo lagu iibiyo daasad
U isticmaal gabal aluminium kuleyliyaha ah isku xira inta udhaxeysa silsiladda iyo silsiladda qaybta.
Gabal naxaas ah oo horeyba u dhammaaday oo leh afar weji oo ka soo saara korantada korontada ayaa ah qaybta taageerta silsiladda oo mas'uul ka ah quudinta silsiladda uumiga
Fure aan ka soo qaato silsilad gaas ah oo loogu talagalay qaboojiyaha oo ah kaabad joojiyaha kululeeyaha oo aan ku maamuli doono servo.
Eeg maqaalka oo dhan
Eolipíla ama Aeolus ee Heron
La Eolipila ama Aeolus ee Heron waxaa loo tixgeliyaa sida Mashiinka kuleylka ugu horeeya taariikhda.
Ninkii hindisay wuxuu ahaa Injineerkii Giriigga iyo xisaabiyihii Heron ee Alexandria (The Elder) laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ee AD Heron waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah hal-abuurayaashii ugu waaweynaa ee soo jireenka ahaa, waxbarashadiisii ​​iyo shaqadiisuba waxay matalayaan xilligii Hellenistic-ga.
Waxyaabaha uu sida fiican u yaqaan waxa ka mid ah Ishii Heron iyo Eolipila (aelópilo ama aélópila) oo aan ka hadlayno marka xigta. Marka lagu daro daraasado badan oo ku saabsan xisaabta, optics-ka iyo pneumatics-ka oo isagu uu ikhtiraacay.
La Aeolipila, Waxay ku samaysantaa meel bannaan oo laba god oo qalooca ka soo baxaan taas oo uumiga biyuhu ka soo baxo oo ka dhigaysa inuu wareego.